भिडिओ रिपोर्ट : ढाड किन दुख्छ, यसको उपचार कसरी गर्ने ? :: Setopati
डा. रामचन्द्र श्रेष्ठ एमएस सर्जन
ढाड दुख्नुको मुख्य कारण गलत तरिकाले काम गर्नु वा बस्नु नै हो। त्यसक्रममा ढाड वा नजिकको मांसपेशीमा असर परेर ढाडको समस्या सुरू हुन्छ।
कुर्सीमा बसेर बढी समयसम्म काम गर्नेलाई ढाडको समस्या धेरै हुन्छ। एउटै ‘पोजिसनमा’ बस्दा पछाडिको मांसपेशी एकदमै थाकेको हुन्छ। ढाडलाई अफ्ठ्यारो गरेर राखिराख्यो भने मांसपेशी थाकेर ढाड दुख्छ।
‘पोजिसन’ ठीक भएन भने पनि ढाड दुख्छ। लामो यात्राको समयमा पनि यो समस्या आउने गर्छ।
नशासम्बन्धी समस्याले पनि ढाड दुख्छ तर यो सम्भावना तीन प्रतिशत मात्रै हुन्छ।
ढाडको ‘मुभमेन्टलाई’ नियन्त्रण गर्न नसकेको बेलामा पनि मांसपेशी कमजोर हुन्छ। जसले गर्दा ढाड दुख्छ। यस्तो बेलामा दुखाइ कम हुने औषधि खानुपर्छ। कम भइसकेपछि मांसपेशीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि मांसपेशी सक्रिय हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ ढाडको समस्या किड्नीमा पत्थर परेर पनि हुन्छ। पेटको समस्या भयो भने पनि समस्या हुन्छ। तर यस्तो समस्या एकदमै कम हुन्छ।
काम गर्दाखेरी निहुरिएर गर्ने भारी सामान निहुरिएर उठाउने गर्दा पनि ढाडमा समस्या आउँछ । धेरै बसिरहँदा ढाँड दुख्ने समस्या आउछ । नसा च्यापीएर सुरुमा ढाँड नै दुख्छ।
ढाड दुख्नुका कारणहरू :
वाथ अर्थात् विभिन्न कारणले जोर्नी दुख्ने र सुन्निने रोग र उमेर अनुसार मेरुदण्ड खिइने र नशा थिचिने समस्याले ढाड दुख्न सक्छ । तस्तै हड्डीको संक्रमण, हड्डीको मासी (क्याल्सियमको कमीले हड्डी कमजोर हुनु), अस्थिमृदुता (osteomalacia) आदिले पनि ढाड दुख्न सक्छ।
कुनै सामान उचाल्दा अनुपयुक्त तरिकाले उचाल्ने, नमिल्दो आसन र नियमित व्यायामको कमीका कारणले ढाड दुख्छ।
मृगौलामा पानी जम्नु, मृगौलाको पत्थरी, मूत्राशय, मूत्रनलीको तल्लो भागमा संक्रमण आदिद्वारा तल्लो ढाडमा दुखाइ हुन सक्दछ ।
धेरैजसो ढाडको दुखाइ छोटो हुन्छ र घरेलु उपचार र दुखाई कम गर्ने औषधिबाट निको हुन्छ। ढाडको दुःखाइ अनुसार चिकित्सकीय सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ। दैनिक जीवनका क्रियाकलाप नै गर्न नसकिने गरी ढाड दुखेमा,ढाडको दुखाइ कडा भएमा, केही समयपछि निको नभएमा वा आराम गर्दा वा उत्तानो पर्दा पनि दुखेमा,खुट्टामा झमझम वा कमजोरी भएमा वा उभिँदा वा हिँड्दा गाह्रो भएमा चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ।
ढाड दुखेका बिरामीहरूलाई उनीहरूको अवस्था हेरेर सुरूमा चार हप्तादेखि ६ हप्तासम्म औषधि दिएर हेरिन्छ त्यपछि पनि भएन भने फिजियोथेरापी सुरू गरिन्छ । छ हप्तासम्म फिजियोथेरापी गरेर पनि बिरामी सामान्य जीवनमा फर्किन सकेन भने र दुखाइ बढी भयो भने अपरेशन गर्दा राम्रो हुन्छ । अपरेशन सामान्य गर्दा पनि हुन्छ धेरै ठूलो गर्नु पर्दैन।
अपरेशन गरेर प्यारालाइसिस हुने भन्ने हुँदैन। नसा च्यापिएर खुट्टा कमजोर हुन थाल्यो खुट्टामा लाटोपना बढ्न थाल्यो भने दिसा पिसाब नरोकिने समस्या भयो भने अपरेशन गरिहाल्नुपर्छ । तर ढाड दुख्ने सबै समस्या भएकाहरूलाई अपरेशन गर्नु पर्दैन । ९५ प्रतिशत ढाडको समस्या औषधि र फिजियोथेरापीले निको हुन्छ।
ढाडलाई धेरै बल पर्ने गरी र ढाडलाई तन्क्याएर काम गर्नु हुँदैन। बाइक चलाउँदा पनि होसियारी अपनाउनु पर्छ। सकेसम्म पेटीको प्रयोग गरेको राम्रो हो। मोटोपनाले पनि ढाड दुखाउँछ त्यसैले तौललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। खेतबारीमा काम गर्नेहरूले पटुका बाँधेर काम गर्यो भने ढाडको समस्याबाट जोगिन सकिन्छ। नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने र योगा गर्ने गर्दा पनि ढाडलाई फाइदा पुग्छ । ढाडको समस्या हुनेहरूले के खाने के नखाने भन्ने त छैन तर धुम्रपान गर्नेहरूलाई यसको जोखिम बढी हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १४, २०७६, ०२:१३:००